YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, November 09
9 Nov 2010 ဒိုင်ယာရီ
Nov92010 Yeyintnge's Diary
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 11/09/20100အကြံပြုခြင်း
မိခင်ဖြစ်သူ နှင့် တွေ့ ဆုံရန် ဘန်ကောက်ရှိ မြန်မာ သံရုံးတွင် ဗီဇာ လျှောက်ထား နေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သား
Brock University: Burma Awareness Night
Tuesday November 9, 7-9 pm, Thistle 259, Brock University
Brock Amnesty International and OPIRG Brock will be welcominganumber of prestigious speakers including Dr. Naing Aung,aprominent democracy activist from Thai-Burma border to this event.
For more information please contact amnestyatbrock@gmail.com or call OPIRG at (905)-688-5550 ext. 3499
41677999 ThanShwe Orders MajGen Kyaw Kyaw Tun Arrested and Sent Back to NPT Artillary Ready on Phayagone
NDF St on Current Battle at TBB
Voice of Burma Information Group Issue No.787, September 7, 2010
ကြိုတင်မဲအားလုံးကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆို
"ဗဟန်းမှာ ခမောက်ရှုံးစရာ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရှုံးတယ်ဆိုလို့ အံ့သြရပါတယ်။ မဲရုံအမှတ် ၂ မှာ မဲ ၂၅၀ နဲ့နိုင်နေတယ်။ ကြိုတင်မဲ ၁၀၀ ကျော်ထပ်ရောက်လာတဲ့အထိလည်း နိုင်နေသေးတယ်။ မြို့နယ်ကော်မရှင် ရုံးရောက်မှ မနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်မဲပေးခဲ့သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး" ဟု ဗဟန်းမြို့ နယ်တွင် နေထိုင်သူမဲဆန္ဒရှင်တစ်ဦးက ပြောပါသည်။ ကြိုတင်မဲနှင့်ပတ်သက်သော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ပြဌာန်းချက်များ
The ABSDF's statement on current DKBA's offensive
ဘုရား ၊ ကျောင်းကန် ၊ ဇရပ် ၊ တွေသာ ရှိပြီး အဲဒီ ဓမ္မအဆောက်အအုံတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မယ့် လူတွေ မရှိရင် အိုမင်းဟောင်း နွမ်း ပြီး ရေညှိအလိမ်းလိမ်းနဲ့ ကြည့်ရတာ မတင့်တယ်သလို ၊ မြန်မာနိူင်ငံသားတွေရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ပြားမှု ကြောင့် ဒီနေ့မြန်မာနိူင်ငံကြီးဟာ အင်မတန်မှ အရုပ်ဆိုး အကြည်းတန်နေပါပြီ ။ ဘာသားတရား တစ်ခုကို အခြားဘာသာတစ်ခုက ပျက်စီးအောင် လုပ်လို့မရပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာတရားကို ပျက်စီးအောင် ဖျက်စီးနိူင်တာ ကိုယ်ဖြစ်သလို ၊ သန့်ရှင်း ပြန့်ပွားတာဟာလည်း ကိုယ်တိုင်ပါဘဲ ။
ဒီလိုပါဘဲ ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး ဟာ ကျွန်တော်တို့တွေပေါ်မှာ ဘဲ မူတည်နေပါတယ် ။
ဒါကြောင့်မြန်မာနိူင်ငံသားတိုင်း ကိုယ်ကျင့်တရားကို ပြန်လည် ထိန်းမတ်ပေးမှသာလျှင် တိုင်းပြည် တိုးတက်လာမှာ အမှန်ပါဘဲ ။ အခြားဘာသာတွေရဲ့ ဆိုးကွက်ကို လိုက်ရှာပြီး ဝေဖန်နေကြမယ့် အစား ကိုယ့်ဘာသာတရားရဲ့ ကောင်းကွက်ကို ကိုယ်တိုင်လိုက်နာ ကျင့်ကြံ ဖော်ထုတ်နိူင်တာ ပိုအကျိုးရှိပါတယ် တင်ပြချင်ပါတယ် ။
တပ်မတော်သား ဆိုတာ ပြည်သူလူထု ထဲက ပေါက်ဖွားလာတယ် ဆိုတာကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ကြပါနဲ့ ။ သူတို့ကို လက်တွဲခေါ်ယူလို့ရပါတယ် ။ လူမိစ္ဆာတွေ ရဲ့ ယုတ်မာတဲ့ အသိညဏ်မှိုင်းတိုက်မှု ကို ခံနေရလို့သာ ပြည်သူလူထုကို ရန်သူလို သဘောထားနေကြတာပါ ။ သူတို့ကို လမ်းမှန်ပြပြီး ပြည်သူလူထုနဲ့ လက်တွဲပူးပေါင်းပြီး အာဏာရှင်တွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့ ကြိုးစားပေးကြပါ ။ သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူလူထု ဒုက္ခရောက် အောင် လုပ်ကြမလား ၊ အဲဒီလို့ ဒုက္ခရောက် အောင် ဖန်တီးထားတဲ့ အာဏာရှင်တွေကို တွန်းလှန်ကြမလား ။ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးတွေ မွေးမြူပေးကြအောင် ပြည်သူလူထုကဘဲ တပ်မတော်သားတွေကို ပြန်လည်လက်တွဲ ခေါ်ယူဖို့ ကြိုးစားပေးကြပါ ။
တပ်မတော်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်ဖို့ပါ ၊ ပြည်သူလူထုကို သတ်ပြီး အာဏာရှင်တွေ ပေးတဲ့ သူရဲကောင်း တံဆိပ်ကို ရင်ဘတ်မှာ ချိတ်ချင်တာ တပ်မတော်သား ကောင်း မဟုတ်ပါဘူး လို့ နီးစပ်ရာ တပ်မတော်သားတွေကို အသိပေး ပြောကြားလိုက်ကြပါ ။ တပ်မတော်သားတွေ အနေနဲ့ အမိန့်ဆိုတဲ့ စကားလေးကို ခဏလေးမေ့ထားပြီး ကျွန်တ်ာတို့ တိုင်းပြည်အနေအထားကို ငဲ့ကွက်ပေးကြပါ ။ အာဏာရှင်တွေ ပေးတဲ့ အမိန့်စကားကို တပ်မတော်သားတွေ လိုက်နာနေကြတာဟာ တိုင်းပြည် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေတယ် ဆိုတာ လက်ရှိ မြန်မာနိူင်ငံ ပကတိ အနေအထားက သက်သေပြနေပါတယ် တပ်မတော်သား အပေါင်းတို့ ။
အခုဆို၇င် အာဏာရှင်တွေက သူတို့ အာဏာ တည်မြဲရေး အတွက် နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ ပြည်တွင်းစစ်ကြီး တစ်ခုကို ပြန်လည် ဖန်တီးလိုက်ကြပါပြီ ။ နယ်စပ်မှာ စစ်ဖြစ်တာ ငါတို့ နဲ့ အဝေးကြီးပါလို့ သဘောမထားကြပါနဲ့ ။ ပြည်တွင်းစစ်ပွဲ ဆိုတာ နိူင်ငံသား အချင်းချင်း သတ်ကြတာပါ ။ အဲဒီ စစ်ပွဲ ရဲ့ ကုန်ကြစရိတ်ကို ပြည်သူလူထုဘဏ္ဍာက ကျခံကြရတာပါ ။ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ ဆိုတာ နိူင်ငံသားတိုင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ပထမဆုံး အနေနဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ နိူင်ငံသားအားလုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဖျက်စီးလိုက်တာပါ ။ ဒီနေ့ မြန်မာနိူင်ငံ ကပ်သုံးပါး ဆိုက်ရောက်နေတဲ့ အဓိက အကြောင်းက အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးကြီးကြောင့်ပါ ။ ဘယ်လို ပြဿနာ အခက်အခဲ တွေဘဲ ကြုံတွေ့ရပါစေ ၊ အဲဒီ ပြဿနာအားလုံးမှာ အခြေခံ အကြောင်းတရား ရှိပါတယ် ။ အဲဒီ အခြေခံ အကြောင်းတရားကို မပြုပြင်နိူင်ဘဲ ဘယ်ပြဿနာကို မှ ဖြေရှင်းလို့ မရပါဘူး ။ အခုလည်း တိုင်းပြည်ပျက်စီးရတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို ဖန်တီးထားတာ အာဏာရှင်တွေ ဆိုတာ သိရင် သူတို့ကို ပြန်လည် တွန်းလှန်ရမှာပါ ။ အချင်းချင်း ပြန်သတ်နေကြရင် သူတို့တွေကို ဆက်လက် အထောက်အပံ့ ပေးထားသလို ဖြစ်နေမှာပေါ့ ။
နိူင်ငံတကာမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိူင်ငံသား အပေါင်းကလည်း ပြည်တွင်းက လူတွေရဲ့ ဒုက္ခများကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ထားပြီး နိူင်၇ာ တာဝန်ယူပေးကြပါ ။ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေး လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်လို့ မြန်မာနိူင်ငံသား အချင်းချင်း လက်တွဲဆောင်ရွက်ကြပါ ။ အခုချိန်မှာ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ နယ်စပ်ဒေသမှာ တိုက်စစ်ဆင်နေပါတယ် ။ ရွေးကောက်ပွဲ ပြဿနာကလည်း မပြီးသေးပါဘူး ။အခုချိန်မှာ ပြည်သူလူထုကသာ ညီညာစွာ ရုန်းထကြမယ်ဆိုရင် မကြာခင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးအောက်က လွတ်မြောက်ပြီး လွတ်လပ်၍ တရားမျှတကာ ၊ ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံကို တည်ဆောက် နိူင်မှာအသေအချာပါ ။ မြန်မာ နိူင်ငံ အာဏာရှင် စနစ်ဆိုး အောက်က လွတ်မြောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီ နိူင်ငံကို တည်ဆောက် နိူင်အောင် နိူင်ငံသားအားလုံး ရုန်းထကြပါစို့ ..........။
နအဖစစ်အုပ်စုရဲ့အတုယောင်ရွေးကောက်ပွဲကတော့ အားလုံးတွက်ဆထားကြတဲ့အတိုင်း တရားမဲ့မှုများစွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ ၊ ပြည်သူကို လက်နက်နဲ့ဖိနှိပ်ထားနိုင်နေပြီလို့ သွေးနထင်ရောက်ထင်ရာစိုင်းနေတဲ့စစ်အုပ်စုက သူတို့ရဲ့တဘက်သတ်ရလာဒ်တွေကိုမကြေငြာခင်မှာပဲ လက်နက်ကိုလက်နက်ချင်းခုခံစစ်ကို ဗိုလ်နှုပ်ခမ်းမွှေးနဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက ပြန်လည်စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအပါအ၀င် ဗမာပြည်သူတွေ ၊ စစ်အာဏာရှင်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ကြတဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံမှာ အများစုက အကြမ်းမဖက်ရေးလမ်းစဉ်ဆိုပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ် ၊ ငြိမ်းချမ်းစွာလူထုတိုက်ပွဲနည်း ဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲ(၁၉၉၀)၀င်တာ ၊ ပါတီတွေ ထောင်တာ ၊ ဖမ်းဆီးခံပစ်သတ်ခံပြီး ဆန္ဒပြလှုံ့စော်တာ ၊ စတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ လက်နက်မဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရေးကိုကြိုးစားခဲ့ကြသလို တချို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကလဲ ယာယီအပစ်ရပ် ၊ နားလည်မှုတည်ဆောက်တဲ့နည်းကို ငြိမ်းချမ်းရေးနည်းလမ်းအဖြစ် ဖြတ်သန်းရပ်တည်ခဲ့ကြပါတယ် ။
အဲ့ဒီအတွက် ၁၉၄၈ ကာလထဲက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနည်းကိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ ၊ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနောက် ပိုင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတဲ့ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အခက်ခဲမျိုးစုံ ၊ အချိုးကွေ့မျိုးစုံကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတော့တယ် ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲမှာကိုက လက်နက်ကိုင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းထက် ညှိနှိုင်းအဖြေရှာတဲ့နည်းကိုအသုံးပြုရေးဖြစ်လာတဲ့အခါ ဗမာပြည် အတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနည်းမှာ အားလျော့စရာတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။
လူတွေက နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေဖန်တီးဘို့ စဉ်းစားကြတဲ့အခါ ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အခြေအနေတွေ ၊ ရလာဒ်တွေ ၊ လူ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားတတ်ကြပါတယ် ၊ ဒီလိုနှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားပြီးအဖြေထုတ်နည်းလမ်းရှာတဲ့နည်းဟာ တခြားနိုင်ငံတွေအတွက် မှန်ကောင်းမှန်မှာဖြစ်ပေမဲ့ ဗမာပြည်အတွက်ကတော့ မမှန်ခဲ့ဘူးဆိုတာ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးတဲ့နှစ်တွေ ၊ ခုထိအတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူ တွေက သက်သေပြပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဗမာပြည်ကစစ်အာဏာရှင်တွေက ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်သူနဲ့မှမတူတဲ့ အင်မတန်ရက်စက်ယုတ်မာ ကောက်ကျစ်လူမဆန်သူတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ ။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးသမားဆိုသူတိုင်းက စာတွေဖတ်ကြတယ် ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးတွေ ၊ သမိုင်းတွေ ၊ ကမ္ဘာပေါ်ကထင်ရှားကျော် ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို လေ့လာကြတယ် ၊ အဲဒီအတွက် (အများစု) စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲနည်းလမ်းရွေးချယ်မှုမှာ အမှား တွေဖြစ်လာရပါတော့တယ် ၊ ရန်သူ/အတိုက်အခံ မကွဲပြားတဲ့ အမြင်တွေဖြစ်လာပါတော့တယ် ၊ လက်နက်အားကိုးတန်ခိုးပြပြီး လူသတ် ပွဲနဲ့အာဏာခိုင်မြဲအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေကို ရန်သူလို့ ပြတ်ပြတ်သားသားသတ်မှတ်ရမဲ့အစား တခြားနိုင်ငံကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး အတိုက်အခံလိုသဘောထားဆက်ဆံခဲ့ကြတယ် ၊ စစ်အုပ်စုကတော့ သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ဖီဆန်သူတိုင်းကို ရန်သူလို့ပြတ်ပြတ်သားသား သတ်မှတ်ပြီး နည်းလမ်းစုံနဲ့ ရက်ရက်စက်စက်ချေမှုန်းခဲ့တာချည်းဖြစ်ပါတယ် ။
ခံခဲ့ရပြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်များစွာနဲ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပြီးတဲ့ကာလတွေအတွက် မေးခွန်းနှစ်ခုရှိပါတယ် ၊ ကိုယ့်ဘာသာ ဖြေကြည့်တွေးကြည့်ကြစေချင် ပါတယ် ၊ (၁)ဗမာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီလိုလားသူအားလုံး ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ရင်ဆိုင်နေကြဆဲစစ်အာဏာရှင်တွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရန်သူလား အတိုက်အခံလား ၊(၂)ရန်သူဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောထားမလဲ အတိုက်အခံဆိုရင်ဘယ်လိုသဘောထားမလဲ၊ ကျွန်တော်ကတော့ ရန်သူလို့သတ်မှတ်ပါတယ် ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကို သာမန်နည်းလမ်းတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ယုံမဟုတ်ပဲ ရဟန်းသံဃာမချန် ကလေးမိန်းမမချန် ကျောင်းသားမချန် ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်သတ်ဖြတ်ပစ်တဲ့အထိ ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေမို့ ရန်သူလို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်၊ သူက ကိုယ့်ကို ရန်သူလိုသဘောထား ရက်ရက်စက်စက်နည်းတွေသုံးနေတာကို (သာမန်အားကစားပြိုင်ပွဲတခုလိုမဟုတ်တဲ့အတွက်)ငြိမ်ခံမနေ နိုင်ပါဘူး ၊ အတိုက်အခံအဆင့်ဆိုရင်သာ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ ၊ ရန်သူလို့သဘောထားရင်တော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့နိုင်နိုင် အနိုင်ရအောင်ရင်ဆိုင် ရမှာပါ ၊ မျှမျှတတယှဉ်ပြိုင်နေဘို့ မလိုပါဘူး ၊ အဲဒီ ရန်သူ/အတိုက်အခံ အဖြေမကွဲပြားမှုကြောင့် စစ်အာဏာရှင်ကိုရင်ဆိုင်ဘို့ နည်းနာ လွဲချော်ခဲ့ကြတာလို့ ကျွန်တော် ရဲရဲပြောဝံ့ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေအပေါ်အမြင်မရှင်းမှု သို့မဟုတ် အမြင်မခိုင်မာမှုတွေကြောင့်ပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာအကြမ်းမဖက်တိုက်ပွဲဝင်ရေးနည်းကို တရား သေဆုတ်ကိုင်ထားကြသူတွေ၊ နာကျည်းစရာကြုံတုန်းခန လက်နက်ကိုင်ပြန်ချမယ်ဆိုသူတွေနဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးရဲ့ ပင်ပန်း ဆင်းရဲမှုတွေကို ခါးသီးကြောက်လန့်လာသူတွေဟာ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကနေ တဖြည်းဖြည်းသွေဖီလာကြပါတယ် ၊ တချို့က နိုင်ငံတကာအကူညီရရှိရေး ၊ တချို့ကတတိယနိုင်ငံတွေထွက်ခွာရေး၊ တချို့ကရန်သူနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရေး၊တချို့က စား ပွဲဝိုင်းထိုင်ဆွေးနွေးနိုင်ရေးဆိုပြီး လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုရှောင်ခွာခဲ့ကြရာမှာ ရန်သူနဲ့ရန်ငါစည်းယတိပြတ်သူတွေ ၊ လက်နက်ကိုင်လမ်း စဉ်ကိုသာသက်ဝင်ယုံကြည်သူတွေကျန်ရစ်ပြီး ရန်သူရဲ့အညှိုးတကြီးချေမှုန်းမှုကို အလူးအလဲကာကွယ်နေခဲ့ရပါတယ် ။ အဲဒီလိုနဲ့ ရန်သူ့ ဘေး ကာကွယ်ရေးသာလုပ်နိုင်ပြီး ထိုးစစ်မဆင်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာ ကြာလေလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကနေဖယ်ခွာလေဖြစ်လာကြပြီး လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလမ်းစဉ် မှေးမှိန်သလို ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ် ။
အနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်မှုကိုကျူးလွန်လိုစိတ်ရှိသူတွေဟာ လက်နက်ကိုပဲတန်ဘိုးထားတာဖြစ်ပါတယ် ၊ လက်နက်နဲ့အင်အားကိုအားကိုးပြီး ဗိုလ်ကျစိုးမိုးနေသူတွေက သူတို့ထက်သာတဲ့အင်အားနဲ့ လက်နက်ရှိသူတွေကိုပဲကြောက်တာပါ ၊ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်မှာလျှောက်လှမ်း နေသူတွေလျော့နည်းလာတဲ့အပေါ် တဖြည်းဖြည်းထင်ရာစိုင်းလာတာပါ ၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအင်အားတောင့်ခဲ့တဲ့ကာ လတွေကနိုင်ငံရေးအခြေအနေ ၊ ရန်သူစစ်အုပ်စုရဲ့အခြေအနေနဲ့ ၊ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေချည့်နဲ့လာတဲ့အချိန်ဖြစ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ ၊ ရန်သူ့သဘောထားတင်းမာမှု နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ ။
ဒီပဲယင်းလိုဥပဒေမဲ့မှုမျိုး ပြောင်ကျူးလွန်ခဲ့တယ် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ လူထုတိုက်ပွဲဦးဆောင်သူတွေကို မတရား ထောင်နှစ်ရှည်တွေချခဲ့တယ် ၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလို ရဟန်းသံဃာတွေသတ်တာ ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေချိတ်ပိတ်တာစတဲ့ အနိုင်ကျင့် မှုမျိုးတွေ ရဲရဲဝံ့ဝံ့လုပ်လာခဲ့တယ် ၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကိုဥပေက္ခာပြုခဲ့တယ် ၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒ ၊ ဘာသာ ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေ ကိုတန်ဘိုးမထားခဲ့ဘူး ၊ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဆန္ဒခံယူပွဲံကို နာဂစ်လိုလူသိန်းချီသေရတဲ့မုန်တိုင်းဘေးသင့်ချိန်မှာတောင် အဓမ္မလုပ်ခဲ့တယ်၊ ခုနောက်ဆုံး ဘယ်သူဘာပြောနေနေ တိုင်းရင်းသားအပစ်ရပ်တွေ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ပေးမှုမျိုး ၊ ၂၀၁၀ ရွေး ကောက်ပွဲဆိုတာကို အာဏာတန်းလန်းစစ်ယူနီဖေါင်းချွတ်တွေနဲ့ကြံ့ဖွတ်ပါတီဖွဲ့ ၊ အနိုင်ရရေးထင်သလိုလုပ်နေတာတွေဟာ လက်နက် ကိုင်အင်အားစုတွေ အားလျော့နေခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဗမာပြည်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ဖခင်ကြီး နေ၀င်းလက်ထက်မှာတုံးကတောင် KNU ၊ ဗကပနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအားကောင်းခဲ့တော့ ဒီလောက်မရမ်းကားနိုင်ခဲ့ပါဘူး ။
စစ်အုပ်စုရဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးလုပ်ဆောင်ချက်အဆင့်ဆင့်ကို ဘယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ၊ ဘယ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ဘယ်နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းကမှ မတားနိုင်ခဲ့ဘူး ၊ ဆိုးရွားစုတ်ပြတ်အောက်တန်းကျမှုမျိုးစုံနဲ့ အစိုးရနာမည်ခံထားတဲ့ရာဇ၀တ်ကောင်တွေကို ကုလသမဂ္ဂကအသိမှတ်ပြုထားဆဲ ၊ အာဆီယံနိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေဆဲပဲ ၊ စိုးရိမ်မကင်းစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်ဆိုတာထက်ပိုလာအောင် ဘယ်သူမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ကြဘူး ၊ ဒီလိုနဲ့ ၂၂ နှစ်ကျော်ကြာခဲ့ပြီ ၊ ပြောင်ထင်သလိုသတ်လို့ သေတဲ့သူတွေများပြီ ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့် အဟာရချို့တဲ့ပြီးဖြစ်ဖြစ် ၊ အသိချို့တဲ့မှုကြောင့် ရောဂါဘယပိုးမွှားကူးစက်ခံရတာတွေဖြစ်ဖြစ် မသေသင့်သေးပဲသေခဲ့ရသူတွေများပြီ ၊ မပြည့်စုံမလောက်ငှတဲ့ဘ၀တွေကြောင့် မပျက်ဆီးသင့်ပဲဆုံးရှုံးပျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့ဘ၀တွေ များပြီ ၊ အဲဒီပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်သူတွေက တာဝန်ခံမလဲ ၊ နောက်ရော ဘယ်လောက်ဘယ်ကာလထိ ဒီလိုဆက်ကြုံတွေ့ခံစားနေကြရဦးမလဲ ။ ဘယ်လိုတိုက်ပွဲပဲစဉ်းစားစဉ်းစား ပြည်သူတွေလက်တွေ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေဆိုးနဲ့ပဲ နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားကြသင့်ပါပြီ ။
အခုတော့ရှင်းတယ် ၊ အပစ်ရပ်ထားတယ်ဆိုတာ တကယ်တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်စေတနာမှန်လို့မဟုတ်ဘူး ၊ စစ်မျက်နှာလျော့အောင် လို့ဆိုတာသိလာတဲ့ ၊ အိမ်ကြက်ချင်းအိုးမည်းသုတ်ခွပ်ခိုင်းတာကိုခံနေရတဲ့ဘ၀ကို နာကျည်းလာတဲ့ ၊ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေး ကိုဥပေက္ခာပြုပြီး အနိုင်အထက်ပြုနယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ခိုင်းတာကိုလက်မခံတဲ့ ၊ ရွေးကောက်ပွဲကိုမတရားသဖြင့်နည်းတွေနဲ့လုပ်ပြီး စစ်အာဏာခိုင်မြဲလာတာနဲ့အမျှ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားတွေကို နိုင်သထက်နိုင်လာမှာဆိုတာသိလာတဲ့ ၊ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုပြန်ခံချရ မလဲဆိုတာလဲ နားလည်သဘောပေါက်တဲ့ ဗိုလ်နှုပ်ခမ်းမွှေးနဲ့ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက မြ၀တီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့အတူ စစ်အုပ်စုရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ထိထိရောက်ရောက်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ပြလိုက်ပြီ ။
ဒီတိုက်ပွဲဟာ ပြည်သူတွေရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လိုလားမှုကို ဖေါ်ထုတ်ပြလိုက်တာဖြစ်တယ် ၊ ဘယ်ပြည်သူကမှ စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်ကိုစိတ်မ၀င်စားဘူး ၊ DKBA ရဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုပဲ စိတ်ဝင်စားကြတယ် ၊ DKBA ရဲ့အောင်ပွဲကိုပဲမျှော်လင့်နေကြတယ် ၊ KNU အပါအ၀င် ၊ ကျောင်းသားတပ်မတော်နဲ့ တခြားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုအားလုံးကပါ နေရာတိုင်းက၀ိုင်းတိုက်ကြဘို့ နှိုးစော်နေကြတယ် ၊
ဒါဟာလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးရဲ့ အလင်းရောင်ပါပဲ ၊ ရန်သူကိုရန်သူလိုသဘောထား တိုက်ကြရမယ်ဆိုတာ အသိတွေကိုနှိုးဆွလိုက် တာပါပဲ ။
ဒီ၂၂နှစ်တာကာလမှာ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရော ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနည်းဆိုသူတွေရောအားလုံးက NLDကိုဝိုင်းရံကြဆိုတာနဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်ကိုဆုတ်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်ကြလို့ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ် ၊ ခုတော့ ခေတ်သမိုင်းရဲ့တောင်းဆိုမှုက ဘယ်သူ့ဘယ်သူကို မှ အပြစ်ပြောဝေဘန်နေစရာမလိုပဲ ငြင်းခုန်နေကြဘို့မလိုတော့ပဲ ကြေံးကြော်သံပြောင်းချိန်ရောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး တူညီပြောင်းသင့်တဲ့ကြွေးကြော်သံက “ရရာလက်နက်ဆွဲကိုင်တိုက်ပွဲံဝင်ကြ ၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုဝန်းရံကြ ”လို့ ။
မြို့တွေပေါ်သပိတ်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတဲ့နည်း ၊ ပြည်သူလူထုကြားမှာ ရရာလက်နက်ဆွဲကိုင်ပြန်ခံချကြတော့ဘို့ လှုံ့စော်တဲ့နည်း ၊ တိုက်ပွဲ ၀င်နေတဲ့ရဲဘော်တွေဆီကို ကျည်/ရိက္ခာသယ်ပို့ပေးတဲ့နည်း ၊ ထောက်ပို့ပစ္စည်း ကျည်/ရိက္ခာတွေ ရှာဖွေစုဆောင်းပေးတဲ့နည်း ၊ ကိုယ်တိုင် လက်နက်ကိုင်ပါဝင်တဲ့နည်း တနည်းနည်းနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချနိုင်ရေးအတွက် လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို ၀န်းရံကြရမဲ့အချိန် ရောက်ပါပြီ ။
“ရရာလက်နက်ဆွဲကိုင်တိုက်ပွဲံဝင်ကြ ၊ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုဝန်းရံကြ ”
မြ၀တီမြို့တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေသော ဗိုလ်နှုပ်ခမ်းမွှေးနှင့် DKBA ရဲဘော်များ
ဘုရားသုံးဆူမြို့အားတပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်နွှဲခဲ့သော KNU ရဲဘော်များ
တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်အားလုံးအား အလေးပြုပါသည် ။
OTTAWA ... နအဖ၏ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးအခမ်းအနားမှဒေါက်တာနိုင်အောင်
Voice of Burma Information Group Issue No.787, Sep...
OTTAWA ... နအဖ၏ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးအခမ်းအနားမှေ...